Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment के हो दशै, कसरी शुरु भयो ? जान्नुहोस - Pnpkhabar.com
के हो दशै, कसरी शुरु भयो ? जान्नुहोस
विजयादशमी भनेपछि विजय जोडिन्छ, विजय भनेको जित हो । त्रेता युगमा रामले लंकामा विजय प्राप्त गरेपछि पृथ्वी नारायण शाहको दिग्बिजय पनि जोडियो । तर यसको प्रारम्भ नत मैशासुरलाई मारेको कारणबाट हो, न त रावणलाई नत पृथ्वी नारायणको दिग्विजयको कारणले नै आरम्भ भएको हो । यो त पहिलेदेखि नै चलेको चलन हो । यसको प्रारम्भ भएको नेपालबाटै हो । अरु देशबाट होइन ।
नेपाल हिमाली देश । जति धेरै हिमाल हुन्छन् । जलप्रवाह त्यति नै बढी हुन्छ । पहिले हिमालहरुमा विशाल हिउँ हुन्थ्यो । नदीनाला ठूलाठूला हुन्थे । वर्षामा बाढी आउँछ । प्राचिन कालमा पैदलै हिडेर नदी तर्नुपथ्यो । हिउँदमा बिबाहवारी हुने । टाढाटाढाबाट घर आउनु पथ्र्यो । पुल थिएन । टाढा भएकाहरुको केही खवर आउँदैन । असार बित्छ, साउन, भदौ बित्छ, अनि असोजको आधाआधी बितेपछि जव शुक्ल पक्ष आउँछ । वर्षातका भेल साम्य भएका हुन्छन्, पानी सङ्लो भएको हुन्छ । नदी कहाबाट तर्ने भन्ने बुद्धि लगाउन सजिलो हुन्छ । पारिका मान्छे वारी, वारीका मान्छे पारी जान्छन् । भेटघाट हुन्छ । यो वर्षा त बाँचियो, प्रकृति माथि जित हाँसिल गरियो भन्ने महसुस हुन्छ सबैमा ।
यसरी प्रकृति माथिको विजयको भावना छँदासम्म सबै जातजाति एउटै भावनामा बाँधिएका थिए । अहिले आएर फेरी आफ्नै तरिकाले अथ्र्याउन थालियो । भुकम्प, चट्टयाङ, नदीनाला, डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले जातजाति छुट्टाउँदैन ।
अहिले दशैलाई सबैले दशैको रुपमा मान्न पनि छोडेको अवस्था छ । कतिपयले यो चाडलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ भन्न थालेका छन् । आर्य र अनआर्यबीचको विवाद उठ्यो । अघिल्लो इतिहास विर्सेकाले यी कुराले ठाउँ पाएका हुन् । प्रकृति माथिको विजयबाट दशै आरम्भ भएको हो भन्ने कुरा नबिर्सिएको भए आर्य र अनआर्यको विजय हुने थिएन । दशै सबै जाति र वर्गको हो । त्यसैले संस्कृतिमा राजनीति प्रवेश गर्यो । फुटाउ र राज गर भन्ने बेलायतीहरुको सिद्धान्तले वर्वाद पर्यो ।